Rabitaanka nin: dhibaatooyinka, aragtida iyo falanqaynta | Ragga Stylish
Bulshadan maanta jirta waxaa jira fikrad ah in ragu ay leeyihiin rabitaan galmo oo ka weyn tan dumarka. Tani ma aha inay la jaan qaado xaqiiqda. Qof kastaa wuxuu leeyahay heerarkiisa rabitaankiisa waana la beddeli karaa iyadoo kuxiran waqtiga. Waxaa jira xariiqyo laga yaabo inuu qofku yeesho rabitaan galmo oo badan iyo waqti kale oo uusan lahayn. Ku rabitaanka nin had iyo jeer xiriir lama lahan galmada.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato waxa nin doonayo iyo waxa khuraafaadka ah iyo xaqiiqooyinka ku saabsan.
1 Rabitaanka nin
2 Rabitaan nin maanta
3 Isbarbardhiga xun
4 Nin iyo jinsi
Inkasta oo bulsho ahaan laga sameeyay fikradda ah in ragga ay ka jecelyihiin dumarka xagga galmada, haddana sidaas maahan. Rabitaanku wuxuu u egyahay inuu yaraado goorta Waxaan helnaa marxalado walaac leh ama haddii dhibaatooyin ay ka dhex jiraan lamaanaha. Badanaa waa sababaha ugu waaweyn ee caadiga ah in ay saameyn ku yeelan karaan rabitaanka ninka. Xaaladdan oo kale, waxaan ka helnay sababo qaarkood oo la xidhiidha hoos u dhaca shakhsiyaadka jinsiga ah iyo u aragtida galmada inay tahay waajibaad halkii laga heli lahaa raaxo.
Rabitaanka nin gudihiisa waxaa sidoo kale jira rajo bulsho oo badan oo gala doorka lamaanaha. Ragga waxaa laga filayaa inay marwalba rabaan inay yeeshaan galmada lama saadaaliyo inta badan. Maskaxda ku hay in rag badan ay eed ku leeyihiin fikradaha laga aaminsan yahay iyaga. Xaqiiqda, si kastaba ha noqotee, waa in qofna uusan rabin inuu galmo sameeyo marwalba. Waxaa sidoo kale loo maleynayaa in ragga ay si joogto ah uga fikiraan inay la kulmaan waxyaabo kacsi leh.
Mararka qaar way dhici kartaa in daqiiqada ay labada qaybood ee lamaanaha rabaan inay galmo sameeyaan aysan isku beegmin. Goorma ayuu ninkaasi yahay Ma dareemaysid inay umuuqato mid amni darro maxaa yeelay waxaan jecel nahay inaan si joogto ah uga aargoosanno ragga bulshada ka tirsan. Ragga badankood tani waa wax laga xumaado waxayna u maleynayaan in hammiga galmada la'aantu ay ku xumeyn karto lamaanaha. Waa macquul in, maalin kasta, aan culeys iyo daal nahay waxaana si fudud u dooneynaa inaan ku jiifano sariirta sariirta oo taxane ah ama aan noqono mid yar ama aamusnaan ah. Xaqiiqadani macnaheedu maaha in lamaanaheena uu joojiyay inuu na jeclaado ama inaanan yeelan rabitaan galmo waqtiyo kale.
Rabitaan nin maanta
Maanta waxaan ognahay in adeegsiga barnaamijyada moobiilka lagu is shukaansado oo lala kulmo dad kale ay sii kordhayaan. Markaad la joogto qof kale waxaan kula kulanay isticmaalka barnaamijyada waa waqti loo maleynayo inay sabab u tahay galmada. Xaqiiqda ah in ninku go'aansaday inuu mid yeesho Galmada galmada waxay noqon kartaa qodob go'aamiya ogaanshaha in noloshu sifiican udhacday iyo inkale. Waana in rabitaanka ninku uusan ku saleysneyn kaliya galmada oo uu si fudud u doonayo inuu la kulmo qofka kale.
Waqtiga isku dhawaanshaha, ninka waxaa laga yaabaa inuusan rabin galmo oo xitaa isaga taariikhdu si wanaagsan ayey ku dhammaatay. Rag badan ayaa u yimaada galmo sababo la xiriira culeysyo iyaga u gaar ah oo bulshada saameyn ku leh. Rag badan ayaa dareema raaxo la aan noocyadan cajaladaha ah waxayna door bidaan inay qofka si fiican u bartaan iyo leeyihiin xoogaa kalsooni dheeraad ah si aad ugu dhawaatid dhanka galmada. Haddii aynaan ku qanacsanayn isdhexgalka noocan ah waxaa ugu wacan inay ka qabowsan yihiin ama ka shakhsiyaad badan yihiin, waxaa dhici karta in, markii ay tahay in la galmoodo, innagu ma lihin rabitaankaas.
Mararka qaar way dhacdaa in hamiga ninku isbadali karo iyadoo kuxiran daqiiqada. Tusaale ahaan, markaad qabtid taariikh qofkuna uu bilaabayo inuu kula xiriiro waxay noqon kartaa inaad rabto inaad u galmooto qofkaas. Si kastaba ha noqotee, markii waqtigu yimaado, waxaa laga yaabaa inaanu yeelan hamigaas si kasta oo aan horey u haysannay.
Arrin muhiim ah oo saameyn ku yeelan karta rabitaanka ninka waa is qiimeynta jirka. Heerarka quruxda kaliya looma dejin dumarka, laakiin sidoo kale waxay si aad ah uga dalbanayaan ragga. Waxaan la qabsaneynaa caadiyan haysashada jir da 'yar, aan aad ugu tiirsaneyn, muruqyada, iwm Noocyada noocan ahi waxay naga dhigayaan inaan abuurno kalsooni darro markay tahay inaynu jidhkeenna tusno dadka kale. Intaas waxaa sii dheer, cabirka xubinta taranka waa mid ka mid ah sababaha ugu murugsan ee sidoo kale ay saameyn ku yeeshaan hayadaha kale ee bulshada. Badanaa waxaa sabab u ah lebbiska iyo isbarbardhiga xun.
Iyo qaadashada filimada sawir-qaadista inay tixraac u tahay waxa cabirka guska uu noqon karo waa qalad. Sidoo kale waa in maskaxda lagu hayaa in xiriirka galmada ee ragga qaarkiis yeelan karaa uu gebi ahaanba ka duwan yahay waxa laga filayo. Xaqiiqda ah in ninku leeyahay dhadhan kale sariirta oo aan la barbar dhigin filimada qaawan micnaheedu maahan inuu ku xun yahay sariirta. Dareenka, nabadgelyo darrida iyo kalsooni-darrada hoose waxay saameyn ku yeelataa kacsiga iyo waqtiga biyo-baxa. Isbarbardhiga waqtiga ay galmo galmo ku sameynayaan filimada marka la barbar dhigo xaqiiqda waa arrin aad u xun oo u horseedda dhibaatooyin la xiriira halista.
Sidoo kale noocyada jirka, cabirka xubinta taranka, waxqabadka, kacsiga iyo waqtiyada biyo bixida oo aad u dheer oo lagu arko noocyada filimada gabi ahaanba waa laga beddelay xaqiiqo jirta oo aan jirin. Qaadashada waxaas oo dhan tixraac ahaan waxay u horseedaa jahwareer isku dayga ah in la gaaro heerar aan la gaari karin. Haddii waligaa aad heshay ama aad fursad u heshay inaad aragto sida loo duubo filim aflagaado ah, fikirka ah inuusan shaqo ku lahayn filimka wax laga beddelay hubaal waa la xaqiijin doonaa.
Nin iyo jinsi
Dhammaan waxyaabaha kor ku xusan waxay la xiriiraan fikradda bulshada ee ah in raggu diyaar u yahay ama ay tahay inay had iyo jeer diyaar u noqdaan inay galmo sameeyaan oo ay fuliyaan ama cabbiraan xiriirrada galmada. Xaqiiqdu waxay tahay inay aad u adagtahay in loo waafajiyo nidaamka maadaama aysan ahayn wax macquul ah gabi ahaanba. Waxaa jira kala duwanaansho ballaaran oo dhinacyo ah oo faragelin kara. Tusaale ahaan, qof kastaa wuu ka duwan yahay oo wuxuu leeyahay dhadhanka galmada iyo rabitaankiisa. Waxaa laga yaabaa inay si fudud u noqoto in labadan qof aysan si fiican ugu xirneyn galmada oo uusan ahayn ninka ay tahay inuu qaado masuuliyadaas.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan rabitaanka nin iyo waxyaabaha lagu tixgeliyo bulshada maanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Rabitaanka nin